Muraayadaha Ciyaaraha, Muraayadaha Akhristayaasha, Muraayadaha Acetate - Yinfeng
la aamini karo
Muddo sannado ah oo iskaashi ah, waxaan aasaasnay ​​xiriir adag oo joogto ah macaamiisha macaamiisha suuqyada waaweyn ee caalamiga ah sida Aasiya, Yurub, iyo Ameerika.
Zhejiang Yinfeng Glasses Co., Ltd. waa soo saaraha xirfadeed ee muraayadaha tayada sare leh, muraayadaha akhriska, muraayadaha PC, muraayadaha xafladaha iyo muraayadaha carruurta. Waxay ku taallaa Taizhou, mid ka mid ah saldhigyada wax soo saarka muraayadaha ugu weyn ee Shiinaha, waxaan leenahay sahayda xasilan ee alaabta iyo xalalka qiimaha lagu daray.
Sida alaab-qeybiye aad u fiican, waxaan ku dhisnay sumcadeena kaliya maahan bixinta xalal tayo sare leh oo joogto ah iyo xalal isku dhafan oo ku jira warshadaha, laakiin sidoo kale ballanqaad dhamaystiran oo ku aaddan qanacsanaanta macaamiisha.
Fadlan nagu dhaaf anaga waxaan kula xiriiri doonaa 24saac gudahood.
Sida alaab-qeybiye aad u fiican, waxaan ku dhisnay sumcadeena kaliya maahan bixinta xalal tayo sare leh oo joogto ah iyo xalal isku dhafan oo ku jira warshadaha, laakiin sidoo kale ballanqaad dhamaystiran oo ku aaddan qanacsanaanta macaamiisha. Xooga saara khibrada macaamiisha oo dhameystiran waxay ka dhigeysaa Yinfeng alaab-qeybiye la isku halayn karo oo loogu talagalay la-hawlgalayaasha ganacsiga muddada-dheer ee Shiinaha.
WAX KA BADAN>>
Faham la'aanta muraayadaha indhaha ayaa doorta...
Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya, Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya, Muraayadaha Xisbiga, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn,